Torohevitra momba ny fampiasana GPS Tracker hisamborana mpiara-miaina tsy mahatoky | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Torohevitra momba ny fampiasana GPS Tracker haka sary ny mpiara-miasa tsy manimba
Ny tsy fanitsakitsahana amin'ny fanambadiana na ny fifandraisana dia io no olana iraisana ankehitriny. Eto an-tany, na iza na iza dia afaka iharan'izany, anisan'izany ny olo-malaza, atleta, ary mpanao politika. Raha toa ny olona manankarena sy tsara tarehy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia tsy mahatazona ny fifandraisan'izy ireo malala, inona no azontsika atao? Ny fahitana an'izany, ny mariazy lava kokoa dia misy fahasimbana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, ka lasa loharanon'ny fianjerana. Amin'ity toe-javatra ity, manomboka mahatsapa ny tsy fankasitrahana ny vady, raha lasa niteraka ny lahy ary tsy te hody intsony. Ny olana toy izany dia manomboka miteraka olana lehibe ary fanerena ny vadiny hahita fiononana amin'ny olon-kafa. Izany no toe-javatra marina izay hanombohana ny fanambadiana tsara tarehy. Fahamarinana misafotofoto eo amin'ny fifandraisana maro izay misy ny hadisoana sy fakam-panahy izay mitarika ny vadinao amin'ny raharaha iray hanimba ny fiainanao tanteraka.
Raha nahita ny vadinao nanao firaisana ianao ary nitady fomba hanamafisana ny ahiahinao ho mety marina, dia eo amin'ny toerana mahamety anao ianao, ahitàna fampahalalana sarobidy mifandraika amin'ny GPS Tracker, izay hanampy anao ao manara-maso ny toerana misy ny fotsy aminao ary miverena aminao hampahafantatra ny toerana misy azy sy ny ataony izao. Tsy misy ahiahy! Amin'izao vanim-potoana maoderina izao, fitaovana vaovao isan-karazany no mampiditra isan'andro, izay mahatonga ny fiainana somary milamina kokoa raha ampitahaina amin'ny fiainana teo aloha, rehefa tsy manana fitaovana ampy hampiasaina ny olona. Ka raha manana ahiahy ianao dia aza matahotra ary mitady ny fifantohanao amin'ny fikarohana vahaolana alohan'ny hanimbana tanteraka ny fiainanao ny mpiara-miasa aminao.
Mety ve ny manakarama valiny manokana?
Eny, manana safidy hanakarama mpanaramaso manokana ianao izay hiasa ho anao amin'ny fahitana ny toerana ary manangona ny fampahalalana momba ny vadinao izay manandrana manambaka anao na izany. Na dia mpitsikilo manokana aza dia safidy tsara kokoa, azonao atao ny mandray ny asa rehetra amin'ny fampiasana teknolojia maoderina ary afaka mahita izany fampahalalana izany tsy misy fandaniam-bola be amin'ny fahazoana mpanaramaso na PI Now, azo atao ny manara-maso ny toerana misy olona mampiasa kely fitaovana noho ny teknolojia maoderina izay mampiasa satelita miaramila mba hahitana ny tranokalan'ny olona iray. Alohan'ny handrosoana dia tokony ho fantatrao fa misy karazany roa an'ny GPS, toy ny:
GPS tena misy
Inona no GPS Logger, ary ahoana no fampiasana azy io?
Raha jerena dia karazana horonantsary fandraisam-peo izay mirakitra ny hafainganam-pandehan'ny olona, ​​ilay toerana sy ny fotoana nilany tamin'io toerana io sy ny sisa. Raha mikasa ny hahafantatra hoe aiza ny fotoana lanin'ny sakaizanao dia mety hanampy anao ity fitaovana ity nefa tsy misy fisalasalana. Marina fa asa mamirapiratra izany, mamela anao hanamarina fa marina ny vadinao na tsia amin'ny toerana misy azy. Eritrereto hoe, raha manao fatorana ao amin'ny tranon'ny olona iray ny vadinao na hihaona aminy any amin'ny hotely iray, dia ampiasao io fitaovana io dia hanamarina tsara ny toerana misy azy izy ary hatramin'ny firy. Raha ny habeny dia bitika kely ilay fitaovana ary azo apetraka na aiza na aiza tianao. Mba hampiasa izany dia tsy maintsy apetranao amin'ny kendrenao na ilay fiara ilay fitaovana. Isaky ny vonona ny hijery ny fampahalalana nangoninao ianao, dia esory na ivelan'ny fiara ary ampidiro ao anaty PC anao raha alaina ny fampahalalana nangoninao ho anao. Mampiasa ny sary amin'ny satelita dia hampiseho ny làlan-kaleha rehetra voatokana ao anaty endrika teks.
Inona no GPS Real-time, ary inona ny fomba fampiasana azy?
Izy io dia endrika miendrika Logger GPS ary mamela anao hahita ireo fampahalalana nangonina ao anaty tranonkala tena izy na amin'ny tranokala, na efijery, na finday. Azonao atao ny manararaotra an'io fitaovana io ary mahita ny tena toerana misy ny mpiara-miasa aminao mba hanaporofoana ny tsy fivadihany. Na dia tsy misy fiampangana isam-bolana ny Logger GPS, handoa famandrihana ho an'ny serivisy ianao satria manome ny data rehetra amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny tamba-jotra finday tena izy. Tsy miresaka momba ny fitaovana rehetra izahay, ary ny fitaovana toy izany dia vitsy kokoa amin'ny isa izay mangataka anao handoa vola isam-bolana.
Fehezanteny amin'ny feo sy rafitra GPS
Mba hanazavana ny ahiahinao dia misy gadona maro izay ahafahanao mahita ny tsiambaratelo ao ambadik'ilay sehatra. Eny, raha misoloky anao ny vadinao tsy ao anatin'ny fotoana fohy, dia mora jerena eto ianao mampiasa fitaovana marobe. Ireto ny fitaovana sasany amin'ireto:
Fiantsoana fiara GPS
Mini Pendant Voice Voice
PowerBand Digital Voice Recorder
Fantatrao tsara ny karazana fitaovana ilainao hitsikilo ny vadinao, ny toerana alehany ary ny olona hihaona aminy. Raha vao hitanao dia ho voavonjy ny fiainanao tsy ho simba. Raha tena mikasa ny hividy gadget karazana tahaka izany ianao, dia tokony hitsidika OMG-Solutions.com miaraka amin'ny fanarahana ny rohy mba hanananao tanana roa miaraka amin'ireo fitaovana sarobidy.
Ny tombony sy ny fatiantoka an'ny rafitra fanaraha-maso GPS
Azonao atao ny mahafantatra ny tombontsoa an'ny GPS Tracking System, ary amin'ny voalohany dia hitaterana ny toerana misy ny kendrena na inona na inona zorony amin'ny lalana mijoro amin'izy ireo. Mahagaga fa tsy hampahafantatra anao ny zavatra nataon'ny vady na olona iray manokana, ary raha toa ka misy ifandraisany amin'ny lehilahy iray hafa ny vadinao, dia misy kosa tantara momba ny tara noho ny asa be dia be. Misy vaovao tsara ho an'ny mpivady toy izany ary misy rafitra mikarokaroka GPS miaraka amin'ny mikrôona ary rehefa avy nahazo ny fitaovana dia tsy maintsy manao asa sarotra ianao amin'ny fandroahana ny poketran'ny vadinao tsy ho ela raha vao mampahafantatra azy.
Noho ny olana goavana, raha tsy afaka miasa ny GPS Trackers, dia mila fiatoana ianao dia eritrereto hoe inona ny zava-maniry manaraka anao. Mijanòna! Misy vahaolana ho anao hampiasa fitaovana finday, rakitsoratra mpitsikilo na fakantsary mpitsikilo mba hanamafisana ny vadinao fa mamitaka ny anao na tsia. Miaraka amin'ny fitaovana toy izany, dia afaka miditra mora foana ny mailaka, lahatahiry finday, metadata amin'ny antso ianao, hafatra avy hatrany amin'ny Skype sy ny maro hafa.
10200 Total Views 2 Views Today
Torohevitra momba ny fiarovana amin'ny fiarovana ny mpiasa miasa anao (A10001)
Afaka manampy ny fisavana ho mpiara-miasa tsy azo itokisana ve ny GPS Tracker?
Ahoana no fomba hahitana GPS Tracker ao anaty fiara misy anao amin'ny Dingana 5
Misafidiana GPS Tracker azo itokisana ho an'ny zanakao miaraka amin'ny Autism
Famantarana ny GPS Tracker ho an'ny olona miaraka…